musha Vatambi Bio Dwayne Johnson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yedu Dwayne Johnson Biography inokuudza Chokwadi nezve Hudiki hwake Nyaya, Hupenyu hwepakutanga. Vabereki veDombo, Mhuri, Nyaya dzerudo, Mararamiro, Hupenyu hweMunhu uye Net Worth.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevatambi vepamusoro venguva dzese. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveDwayne Johnson's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Dwayne Johnson Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kune Biography kutanga, iye American Celebrity ane zita remadunhurirwa "Dombo".
Dwayne Douglas Johnson akaberekwa musi we 2nd waMay 1972. Nzvimbo yake yekuzvarwa iri muHayward, California, United States.
Hupenyu hwehudiki hwaDwayne Johnson.
Dwayne Johnson akaberekwa kuna amai vake, Ata Johnson, uye kuna baba vake, Rocky Johnson.
se Kutonga kweRoma, Dwayne Johnson akaberekerwa mumhuri ine hupfumi hwekurwa nhaka. Baba vake, Rocky Johnson (akaberekwa Wayde Douglas Bowles) inyanzvi yemudyandigere.
Kune rumwe rutivi, sekuru vaamai vaDwayne, Peter Maivia, vaiva Wrestler. Nepo ambuya vake amai vaamai, Lia Maivia, vaive mumwe wevatsigiri vashoma vechikadzi.
Dombo kana Dwayne ane midzi mumhuri yeAnoa'i. Iyi ndiyo yakakura pro wrestling mhuri munhoroondo yeWWE. Sekuru vake, Peter Maivia, vaive hama yeropa kuna Amituana Anoa'i (Sekuru Vanotonga veRoma).
Dwayne Johnson Childhood Biography - Yakashata Kutanga Kune Hupenyu:
Dwayne muduku akakurira muNew Zealand nemaguta akawanda eUnited States. Izvi zvinodaro nekuti vabereki vake vaigara vachingofamba. Kuti agadzirise kudiwa kwebasa remutsimba rababa vake.
Dwayne Johnson (Dombo) seMwana, padivi pevabereki vake.
Nekuda kweizvozvo, Dwayne haana shamwari dzehudiki. Uye aizivikanwa nekukasika kutsamwa.
Akakurumidza kutarisana nechisimba nevana vaiseka basa rababa vake. Pamwe nekukura kwake kwakakura. Iyo yainzi inopfuura avhareji yevana vezera rake.
Hazvina kutora nguva refu kusagadzikana kwehuduku kwakauya. Pamwe chete nedambudziko rezvemari revabereki vake. Izvi zvakakanganisa Dwayne wechidiki. Akatanga kurwa muchikoro uye akazosungwa kakati wandei.
Dwayne Johnson Muviri Kuvaka Chokwadi:
Iwo mahombe ekuvaka muviri uye akaomarara anotaridzika anoonekwa nechitarisiko chaDwayne yaive chirongwa chenguva refu chakatangwa mumakore ake ekuyaruka.
Achitaura panguva yemubvunzurudzo makumi emakore gare gare, Dwayne anoyeuka kuti danho rake rekutanga kuvaka muviri rakaziviswa nematambudziko emari uye zvisingafadzi mhedzisiro yakawanikwa nemhuri yake panguva iyoyo;
Takadzingwa pamba pedu pandaingova nemakore gumi nemana, kukura kwakandirwadza zvisingaite. Ndinoyeuka ndichifunga, Izvi hazvimbofi zvakaitika zvakare.
Varume vandakanamata - saSylvester Stallone naArnold Schwarzenegge- vakavaka miviri yavo uye vakabudirira pakuonekwa neupfumi. Izvo zvinogona kuve ini ndakafunga ndikatanga kushanda.
Chinhu chinonakidza ndechekuti ini handina kuziva kumashure ikako kuti ndanga ndiine nguva yekujekesa.
Saka zvakatanga kushanya kwaDwayne kazhinji kuGyms sezvaaisundidzira kupfuura miganho kuti awane ramangwana rakanaka remari iye nemhuri yake.
Kit Harington Childhood Nyaya yezve Untold Biography Facts
Dwayne Johnson Biography - Basa Rokuvaka:
Zvinokosha pakati pekufambira mberi kwedzidzo yaDwayne yaive dzidzo yake yekutanga pa Shepherd Glen Elementary School Hamden uye Middle School muHamden, Connecticut.
Akafambira mberi kusvika Mutungamiri William McKinley High School mu Honolulu, Hawaii kwaakange aine rake giredhi 8th baba vake Jobho vasati vazivisa kutamisirwa kwavo kuBethlehem, Pennsylvania.
Yaiva paPennsylvania iyo Dwayne akanyoresa Freedom School Chikoro apo akazobudiswa kubhola nemudzidzisi (Jody Cwik) akanga asingatyi kutyisidzira paaishandisa imba yekugezera yakachengeterwa kudzidzisa Vashandi.
Akasvotwa nehunyanzvi hwaDwayne, Jody (parizvino akafa uye akafananidzirwa pazasi) akaraira Dwayne kuti abude chimbuzi nekukasira, zvisinei, mudiki we6'4-mukomana ane 225 mapaundi etsandanyama akapindura kuti aizoenda chete kana apedza kugeza maoko. .
Mhinduro haina kuenda pasi zvakanaka naLate Jody aigona kungomira, kutarisa uye kupisa pamusoro pekusarangwa kwaDwayne.
Dwayne anga asiri munhu asina hana inorova sezvo akakumbira ruregerero kuna Mudzidzisi Jodi zuva raitevera achibata maoko. Akavhundutswa nechiitiko ichi, Jodi aive murairidzi wenhabvu wechikoro akakoka Lad akapfidza kuti atambe nhabvu.
Dwayne akawira murudo nemutambo uyu uye aive nehunyanzvi pane izvo kuti makoreji akamuita iye kunyoresa kupihwa nekuda kwekugona kwake kwenhabvu.
Dwayne Johnson Bio - Mugwagwa weMukurumbira:
Gare gare Jodi Cwik anoenderera mberi kuenda pasi muhupenyu hwaDwayne semunhu akabatsira kutenderedza zvinhu kwaari, ichokwadi Dwayne anokoshesa sezvaanoyeuka nanhasi kuti;
Akatarira pane 'punk kid' uyo akanga asingaremekedzi kwaari, uye akasarudza kutaura kuti 'Ndinotenda mukati mako'. Handimbofi ndakakanganwa zvakakonzerwa nemunhu muupenyu hwangu.
Pazvose zvakanyoreswa kukoreji zvakaitwa kuna Dwayne, akasarudza kudzidza zvizere kudzidza Criminology paYunivhesiti yeMiami Florida.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Dwayne akatamba achidzivirira timu yeYunivhesiti nhabvu uye akatarisira kuzviita kuNFL.
Iye, zvakadaro, akawana zvishoma neboka renhabvu rechikoro nekuda kwekuteedzana kwekukuvadzwa kwakamuchengeta pabhenji pamwe nekusashanda zvakanaka pakudzidza.
Muchiedza chimwe chete, haana kuzombofamba zvakanaka paakaenda kuCanada (mushure mekupedza kudzidza) kuteedzera zviroto zvake zvekutamba muNFL.
Iyo yeCanada Nhabvu Nhabvu kirabhu, Calgary Stampede iyo yakachengetedza masevhisi ake akamuradzika pamwedzi miviri mumwaka wake wekutanga nekirabhu. Izvo hazvina kutora nguva refu Dwayne akadzika nhabvu mushure mekutambura kushushikana uye haana kumbocheuka kumashure.
Dwayne Johnson Biography - Kumuka Mukurumbira:
Kufamba paDwayne akagara nababa vake kuTampa kwavakagovana imba.
Akaudza baba vake nezvechisarudzo chake chekuenda mukurwisana, sarudzo yebasa iyo baba vake vasina kutanga yaibvumira asi gare gare vakagamuchira nekudzidzisa mwanakomana wavo mukurongeka kwechizvarwa chechitatu.
Dwayne akaita kutanga kwake saRocky Maivia muWWE ya1996 (yainzi inozivikanwa seyepasi rose wrestling Federation, WWF) vakapona nhevedzano kwaakanyepedzera chimiro chemurume akanaka.
Aive akavengwa zvikuru neboka revanhu vasina kungoona zvinopfuura manyepo ake asi vaisada zita rake remhete.
Hazvina kutora nguva refu Dwayne asati azvigadzirisazve se "dombo" nekuburitsa chiyero chizere cheye "Tough Guy persona".
Iye mushure mezvo akatonga mumakwikwi e17 uye akazove nekunzwa kwepop tsika mukutarisa charisma yake uye anofarira kutamba. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Dani Garcia ndiani? Dwayne Johnson Anoda:
Dwayne Johnson anoita seanotsika nzira ye Randy Orton uye Shawn Michaels avo vakaroora kaviri. Tinokuendesa mashoko ehutano hwake hwekare uye unovaka kune imwe imba.
'Dombo' rakatanga kuroora kukoreji yake mudiwa, Dani Garcia. Ivo vaviri vakatanga kusangana pavakanga vari vaviri vachidzidza paYunivhesiti yeMiami.
Vakatora hukama hwavo padanho rinotevera nekuroora muna Chivabvu 1997, gore rakatevera Dwayne paakagadzira yake WWE kutanga.
Imba yavo yakakomborerwa nekuzvarwa kwemwanasikana wavo Simone mu2001, mushure mezvo vakarambana murunyararo mu2007.
Hugh Jackman Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kunyangwe akapatsanurwa Dani Garcia anoenderera mberi achishanda semaneja waDwayne mune yake on uye off-screen kuyedza.
Uye zvakare, kupatsana kwavo hakuna kana alimony saSimone (akafananidzirwa pazasi nababa vake) anofarira kuchengetwa kwevabereki vese.
Kutaura pamusoro pehukama hwavo hwekuita-kuroorana munguva yehurukuro, Garcia akataura kuti ari kufamba zvakanaka mubasa rake rekutarisira pasinei nekuparadzaniswa;
“Mira, aimbova mudzimai wake ari kumubata here?, Hongu, ini ndiri maneja wake. Hongu, takambochata. Zvino, ngatiendei tinovaka sh * t pamwe chete. ”
Achienda mberi, Dwayne akatanga kufambidzana naRauren Hashian mu2007, gore rimwe chete mushure mekunge aparadzaniswa naDany Garcia. VaDuo avo vasati varoorana vakaungana mu2006 apo Dwayne aive kutamba iyo The Game Plan.
Izvo zvaiva rudo rwakasvika sechishamiswa padombo sezvaakambotaura;
"Ndakanga ndine ruzivo rwakawanda kuti ndave ndakadanana kamwechete. Kuti ude murudo zvakare? Icho chinhu chakaoma kuita kaviri muchinzvimbo chandinenge ndiri. Ndiri rimwe runyararo mwanakomana wechinono. "
Nekukurumidza kusvika nhasi, Dwayne naHashian vave vachigara pamwe chete kwemakore 11 uye vane vana 2 pamwe chete. Mwanasikana wavo wekutanga, Jasmine, akaberekwa musi we 16th waDecember 2015.
Mwana wavo wechipiri, mukunda Tiana Gia, akaberekwa musi we 17th waApril 2018.
Ivo vaviri vaifanirwa kuroora muchirimo cha2018 vasati vaona kuti paive nemumwe mwana arikuenderera, kusimudzira kwakadzosera zvirongwa zvemuchato wavo.
"Taifanirwa kuchata munguva yechirimo yegore rino asi takazobata pamuviri uye Amai havadi kutora mifananidzo yemuchato nedumbu rakakura - Amai vanoda kutaridzika zvakanaka."
inoratidza Dwayne yehutano hwavo hwekuchata.
Hazvingave nguva refu Dwayne akaroorana naHashian uye isu tichaita zvatinokwanisa kuti tikuchengetedzere iwe kana bhero dzechichato dzichiridzira doo.
Dwayne Johnson Hupenyu Hwemhuri:
Dwayne Johnson ndiye ega mwana akaberekwa nevabereki vake. Tinokuunzira ruzivo rwemhuri yake.
Nezve Baba vaDwayne Johnson:
Baba vaDwayne Johnson, Wayde Douglas Bowles anozivikanwa zvikuru nemhete yake inonzi Rocky Johnson.
Iye ari pamudyandigere wekuCanada wrestler uyo akahwina makwikwi akawanda panguva yebasa rake reunyanzvi, kusanganisira kuve chikamu chechikwata chemategi chekutanga chakahwina WWF's (yave kunzi WWE) World Tag Team Championship.
Rocky akasangana naamai vaDwayne Ata mushure mekurwa pamwe nababa vaAta Peter Maivia sevadyidzani vechikwata panguva yemutambo wekuzvimiririra.
Vakaroora vachipesana nezvishuwo zvaPeter uyo aive neruoko-rwekutanga ruzivo rwekusurukirwa uko mhuri dzevarwi vanotambura. Vabereki vaDwayne vakarambana makore akatevera mu2003 nekuda kwekusawirirana kusingawirirane.
Nezve Amai vaDwayne Johnson:
Ata Johnson haasi iye chete amai vaDwayne Johnson asi musimboti wekurudziro yake yekubudirira muHupenyu.
Amai vakasimba avo vaitambura kuti vazviriritire ivo naDwayne mukati memakore ake ekuyaruka ikozvino vanonakirwa neumbozha hwekubudirira kwevanakomana vavo.
Yake yakanga isati yambove mubhedha wemaruva kusvika Dwayne asimuka mukurumbira.
Ata nemwanakomana wake Dwayne vakambodzingwa mufurati yavo muHawaii. Zvakakonzerwa nekutadza kwavo kuenderana nerendi yevhiki nevhiki ye$180.
Motokari yavo yakatorwazve. Uye kuti apedze zvose, akamboedza kuzviuraya. Dambudziko iro Dwayne akarondedzera makore gare gare nenzira inotevera;
"Akabuda mumotokari paInterstate 65 muNashville.
uye SHE akafamba mune iri kuuya traffic.
Ndakamubata. ndokumudhonzera kumashure pabendekete renzira.
Chinonakidza ndechekuti amai vangu havachayeuki chiitiko ichi.
asi zvingava zvakanaka kuti asadaro.”
Nezve Dwayne Johnson's Siblings:
Dwayne Johnson ane hanzvadzi-hanzvadzi Wanda Bowles uye hafu-mukoma Curtis Bowles akazvarwa kuna baba vake nemukadzi wake wekutanga.
Chinyanyo kuzivikanwa nezve Wanda zvisinei, Curtis Bowles muzvinabhizinesi ane zvido mukurwa sekunge baba vake nehafu-mukoma.
Nezve Dwayne Johnson's Hama:
Midzi yaamai yaDwayne mumhuri yeAnoa'i inoita kuti ave hama kune vaimbove varwi, Yokozuna, Rikishi, Umaga, The Tonga Kid pamwe neRome Reigns.
Zvisinei, The Rock uye Kutonga kweRoma ihama dzekure nekuti sekuru vavo - Peter Maivia naAmituana Anoa'i, vaive hama dzeropa.
Dwayne Johnson Mazita emazita:
Dwayne Johnson ane mazita emitambo yakawanda akafuridzirwa nekuonekwa kwake mu-ring, muviri kuvaka kana kuti mafirimu, tinokuendesa mazita mashoma.
"Rocky", "Rocky Maivia", "Iyo Corporate Champion", "The People's Champion", "Flex Kavana" "Iyo Brahma Bull". Zvimwe zvinosanganisira: "Mukuru", "Dombo", "Munhu Anonyanya Kusarudza MuMitambo Yekuvaraidza", "Munhu Anonyanya Kusarudza Pane Zvese Zvekuvaraidza" uye "Munhu Anonyanya Kugonesa Mukubata Kwese kweTwitter".
Dwayne Johnson Kuita Basa:
Kunyangwe Dwayne akawana budiriro nekurwa, kuita kuti mabhaisikopo aone seakasimudzira "Mukwikwidzi weChikwata" kuita stardom kupfuura zvaaigona kunge akazviwana nekurwa chete.
Aive mu2016 ainzi Hollywood mutambi wepamusoro-anobhadharwa. Kufambira mberi kusvika parizvino kunoenderera nekuchengetedza hutongi munzvimbo yevaraidzo.
Inozivikanwa pakati pemabhaisikopo aakaratidza maari ndiThe Scorpion King (2002), GI Joe: Kudzorera (2013), Gridiron Gang (2006), The Other Guys (2010) uye Central Intelligence (2016).
Vamwe Vanosanganisira Jumanji: Kugamuchirwa kuJungle (2017), Moana (2016), Pain & Gain (2013), The Fast and the Furious Series uye Iyo Rundown (2003). Chokwadi ndiye "Iye Anonyanya Kusarudza Munhu MuZvivaraidzo Zvese". Handizvo here?
Dwayne Johnson Biography Chokwadi - Hukama naKevin Hart:
Kevin Hart uye Dwayne Johnson vari kukurumidza kuve vasingaparadzanisike vaviri vepamhepo vakapiwa kemesitiri yavanobata nayo mabasa avo pamwechete.
Ivo vaviri vangangoita timu yakanaka yekuseka mumakore anouya pamwe nekupihwa mamwe mapurojekiti sevaviri vakapihwa kuti vanoda kushanda pamwechete.
Kunze kwezviitiko zvavo zvemamuvhi (Central Intelligence & Jumanji) Kevin naDayne havapatsanurike pasocial media, makapeti matsvuku uye kubvunzurudzwa, vachiratidza hushamwari hunorova vakawanda sechisungo.
Dwayne haazive nezvehukama hwavo sezvaakambobvuma kuve padyo naKevin kupfuura chero mumwe mutambi;
"Handisati ndambova nemhando iyi yehama yakagadziriswa nemumwe munhu".
"The People's Champion" yakavamba Dwayne Johnson Rock Foundation sesangano rerubatsiro rakanangana nekugadzira chikuva chetariro uye mukana wevana pasi rese.
Iyo nheyo inozadzisa izvi nekupa zvirongwa zvekufumisa. Uye kupa simba hupenyu hwevana vane hurema hwekurapa, kusagadzikana uye zvirwere.
Mukuwedzera, nheyo dzinoedza kuvandudza hutano nekuzviremekedza kwevana kuburikidza nepurogiramu yomuviri wayo; kudzidzisa vana nezvekudya zvinovaka muviri uye hutano hwakanaka pakuzadzisa zvinangwa zvavo.
Dwayne Johnson Chokwadi cheMunhu:
Dwayne ane maitiro anotevera kumunhu hwake: Ndiye murume anoshanda, akazvipira uye ane hanya anoziva zvaanoda uye anoisa nzira kuti aite.
Nezve hutera hwake aigona dzimwe nguva kuve akasindimara uye ane pfuma Zvisinei hazvo haambofi akashaya mukana wekudzorera kunzanga sezviri pachena mukuyedza kwake kwekupa. Iye zvakare anovavarira kurova muyero mune chero mamiriro ezvinhu aanozviwana ari iye.
Dwayne Johnson Chokwadi:
"Munhu Anonyanya Kusarudza Pane Zvese Zvekuvaraidza" anogona kuimba uye kuridza gitare.
Anokwanisa kumhanyira kumutungamiriri wenyika yeUnited States
Dwayne's stunt kaviri yezviitiko zvine njodzi zviito haasi chero mumwe munhu asi muzukuru wake Tanoai Reed.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Dwayne Johnson Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!